Khudbadda uu jeediyay Erdogan ka dib Guushiisa – Radio Muqdisho
Khudbadda uu jeediyay Erdogan ka dib Guushiisa
Hogaamiyaha mudada dheer ee dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa marki labaad ku guuleystay madaxweynanimada dalkaasi turkiga,iyada oo la tiriyey codadki doorashada laga dhiibtay 99 boqolkiiba sida ay ku warramayso warbaahinta dowladda.
Mr Erdogan ayaa waxa uu doorashada ugu guuleystay hogaaminayaha boqolkiiba 52.5, halka ninka dhaw ee ay ishayeen ee Muharrem Ince uu uruursaday boqolkiiba 30.7.
Madaxweyne Erdogan oo dad badan Khudbad uga jeedinayay xarunta Xisbiga cadaaladda & Horumarka (AK) ee ku taalo caasimadda Turkiga ee Ankara Guushiisa ka dib ayaa sheegay in qof kasta oo ka mid ah 81-ka Milyan ee Muwaadiniinta Turkiga uu guuleystay.
“ Guuleystayaasha doorashooyinka 24-ka June waa Turkiga, Qaranka Turkiga, dhibka haysta gobolka iyo dhammaan kuwa la dulmiyay adduunka,” ayuu yiri madaxweyne Erdogan.
Wuxuu sidoo kale u mahadceliyay hogaamiyaha xisbiga MHP, xubnaha iyo codbixiyayaasha.
“Waxaan jeclaan lahaa in aan u mahadceliyo dadkayga, walaalahayga kuwaasi oo na aaminay aniga, isbahaysigayga iyo xisbigayga,” ayuu yiri Mr. Erdogan.
Erdogan ayaa horaanta maalintii Axadda ku dhawaaqay guusha uu ku gaaray doorashadii madaxweynenimada ee Turkiga iyo mida baarlamaanka.
Madaxwaynaha ayaa sheegay in uu helay farriinta muwaadiniinta ee doorashada. “Xilligan, wuxuuna carabka ku adkeeyay inuu ka shaqeyn doono sidii horumaro la taaban karo loo gaarsiin lahaa Qaranka Turkiga.
Laga bilaabo berri, waxaan qaadi doonaa tallaabooyin deg deg ah oo lagu fulinayo balan qaadyadii u sameynay Ummadeena,” ayuu yiri madaxweynaha la doortay ee Turkiga Raccip Dayip Erdogan.
Waxa uu sidoo kale sheegay in xukuumaddiisu ay ka hortagi doonto kooxaha argagixisada. “Waxaan kordhin doonnaa sumcadda caalamiga ah ee waddankeena,” ayuu raaciyay hadalkiisa.
“Isla markiiba xafladda dhaarinta, waxaan bilaabi doonaa in aan fulino barnaamijkeenna si aan u aqoonsanno shaqadeena,” Erdogan ayaa sidaas yiri, isaga oo ku dhaartay in uu u shaqeynayo maalin iyo habeen “ma haysanno waqti aan lumino.”sida uu hadalka u dhigay.
“Turkigu wuxuu go’aansaday inuu sare u qaado horumarka, kobcinta maalgashiga iyo wadan sharaf leh oo saameyn ku leh dhammaan qaybaha adduunka,” Erdogan ayaa sidaas yiri.
Ciidanka Xoogga Dalka oo howlgal ku dilay Ajaniib
Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo ku sugan Jabuuti